डाक्टरका कुरा : बच्चा किन जन्मजातै अस्वस्थ हुन्छन् ? स्वस्थ बच्चा कसरी जन्माउने ? - Ratopati
डाक्टरका कुरा : बच्चा किन जन्मजातै अस्वस्थ हुन्छन् ? स्वस्थ बच्चा कसरी जन्माउने ?
बच्चा किन जन्मजातै अस्वस्थ हुन्छन् ? स्वस्थ बच्चा कसरी जन्माउने ? यो आमचासोको विषय हुने गरेको छ । स्वस्थ बच्चा जन्माउने चाहना सबैको हुने भए पनि केही सामान्य कमीकमजोरीले अस्वस्थ बच्चा जन्मिरहेका हुन्छन् । स्वस्थ बच्चा जन्माउन ध्यान दिनुपर्ने केही विषयमा बालरोग विशेषज्ञ डा. रामहरि चापागाईंले जानकारी दिएका छन्
– बच्चाको स्वास्थ्यसँग आमा नै जोडिएर आएकी हुन्छिन् । आमाले अनुपयुक्त उमेरमा जन्माएको बच्चा अस्वस्थ हुने सम्भावना रहन्छ । बायोलोजिकल्ली त महिनावारी सुरु भएदेखि नसुक्दासम्म अधिकांश महिला बच्चा जन्माउन सक्षम हुन्छन् । तर, बच्चा जन्माउने उपयुक्त उमेर २० देखि ३५ वर्ष नै हो ।
२० वर्षमुनिका आमाले जन्माएको बच्चा कम तौलको हुने, समय नपुग्दै जन्मिने, जन्माउनै गाह्रो हुने, बच्चा जन्मिने क्रममा निसासिएर दुर्घटना निम्तिन सक्ने, अप्रेसन गरेर निकाल्नुपर्ने, जन्मिएपछि स्याहारमा समस्या हुनेजस्ता समस्या हुन्छन् ।
यसैगरी, ३५ वर्ष नाघेका आमाले जन्माएको बच्चा जन्मजातै रोगी हुन सक्छ । यो उमेरका आमाको अन्डा पुरानो भइसकेको हुन्छ र यस्तो अन्डाबाट जन्मिएका बच्चा कुनै न कुनै रूपले अस्वस्थ हुने खतरा रहन्छ । आमाको शारीरिक तौल र उचाइले पनि बच्चा स्वस्थ या अस्वस्थ जन्मिने कुरामा प्रभाव पारेको पाइन्छ । ४० किलोभन्दा कम तौल अर्थात् निकै पातली आमाबाट जन्मिएको बच्चाको स्वास्थ्य कमजोर हुन सक्छ । यसैगरी, आमाको उचाइ साढे ४ फिटभन्दा बढी हुनुपर्छ । त्यसो त धेरै मोटी आमाले जन्माएको बच्चा पनि अस्वस्थ हुन्छ ।
बच्चा जन्माउनै गाह्रोसमेत हुन्छ । बच्चा पेटमा रहँदा आमाले गर्ने खानपानले पनि बच्चाको स्वास्थ्यमा प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । पोषणयुक्त र ताजा खानपान गरेको छैन, डाइट मिलाएको छैन भने बच्चा रोगी जन्मिने खतरा रहन्छ ।
गर्भावस्थामा चुरोट र रक्सी सेवन गर्ने आमाका बच्चा पनि स्वस्थ जन्मिदैनन् । यसैगरी, गर्भावस्थामा लिनुपर्ने आराम तथा सन्तुलित व्यायामको अभावले पनि बच्चा अस्वस्थ जन्मिने खतरा रहन्छ ।
आमाले धेरै गाह्रो काम गर्दा पनि बच्चा अस्वस्थ बनिरहेको हुन्छ । रोगी आमाबाट जन्मिने बच्चा पनि स्वस्थ जन्मिने सम्भावना न्यून हुन्छ । खासगरी, एचआइभी एड्स, हेपाटाइटिसजस्ता सरुवा रोग लागेका आमाबाट जन्मिने बच्चा रोगी नै हुन्छ । आमालाई मुटुसम्बन्धी जटिल रोग छ भने पनि बच्चा अस्वस्थ जन्मिन्छ ।
साधारण मुटुको समस्या छ भनेचाहिँ रोकथामका उपाय अपनाए पुग्छ । आमालाई डायबिटिज छ भने बच्चा मोटो जन्मिने खतरा रहन्छ । बच्चालाई पनि डायबिटिज या अन्य रोग लाग्ने खतरा रहन्छ । गर्भावस्थामा आमाले औषधि सेवन गरिरहेको कुराले पनि बच्चाको स्वास्थ्यमा प्रभाव पर्छ । क्यान्सर, छारेलगायत रोगको औषधि सेवन गरिरहेको तथा केमोथेरापी दिइरहेको आमाबाट जन्मिएका बच्चा स्वस्थ हुँदैनन् । यस्ता महिलाले बच्चा नजन्माउनु नै उत्तम हुन्छ ।
घरायसी वातावरणले पनि पेटमा रहेको बच्चाको स्वास्थ्यमा असर पार्ने विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । घरायसी झगडा भइरहने तथा आमा तनावमा रहिरहने गर्दा गर्भको बच्चा स्वस्थ जन्मिदैन । बच्चा पेटमा रहेका वेला आमाले हरर फिल्महरू हेर्नु पनि ठीक होइन ।
बाहिरी आवरणमा बच्चा स्वस्थ जन्मिएजस्तो लागे पनि दिमागको विकास खराब हुन सक्छ । बच्चा मानसिक रूपमा अस्वस्थ रहन सक्छ । दुई बच्चाबीचको जन्मान्तरले पनि बच्चाको स्वास्थ्यमा फरक पार्छ । पहिलो र दोस्रो बच्चाबीचको जन्मान्तर तीनदेखि पाँच वर्षको हुनुपर्छ । योभन्दा कम अन्तरमा बच्चा जन्माउँदा रोगी हुने सम्भावना बढी हुन्छ ।
बिहान बेलुका सधैं घरमा धुपबत्ती बाल्नुहुन्छ भने थाहा पाउनुहोस् यसको हानी
एजेन्सी जेठ १५ – यदि तपाईं पनि आफ्नो पूजा घरमा धेरैजसो धुपबत्तीको प्रयोग गर्नुहुन्छ भने यो खबर तपाईंको लागि हो..
ओन्ली माई हेल्थ जेठ १५ – प्याज निकै सजिलै पाइने खाद्य वस्तु हो । धेरैजसो मानिसहरु यसको तिखो गन्ध र काट्दा आँसु..
यी हुन मोटोपनले निम्त्याउने रोग
एई अन्सारी वरिष्ठ फिजिसियन मोटोपनले शरीरको मेटाबोलिक प्रोसेस स्लो बनाइदिन्छ । कोलेस्ट्रोलको मात्रा पनि बढाउँछ ..
कपालभातीले यसरी बनाउँछ पाचनशक्तिलाई सक्रिय
दीपक नेपाल योग प्रशिक्षक पछिल्लो समय निकै चर्चित प्राणायम विधि हो, कपालभाती । यसमा कपालको अर्थ मस्तिष्क र भाती..
एजेन्सी जेठ १३ – केही मिडिया रिपोर्ट अनुसार नायिका सेलिना जेट्लीले दोस्रो पटक जुम्ल्याहा सन्तानलाई जन्म दिँदैछ..
बच्चा भएपछि पनि उत्साहमय बनाउने यौन जीवनका नयाँ टिप्स
काठमाडौं–एक सन्तान भएपछि कसैले पनि यौनको चाहना सकियो भन्ने ठान्न हुँदैन । कतै बिहे गरेपछि यौन बिनाको दाम्पत्य ..
यस्ता फोटो देखेर विचलित हुनुहुन्छ भने तपाईंलाई हुनसक्छ यस्तो रोग
एजेन्सी – फोबिया अर्थात् डर । वैज्ञानिकका अनुसार कुनै कुरासँग लगातार डराउनु नै फोबिया हो । थुप्रै मानिसहरुलाई ..
चितवन, ११ जेठ । भरतपुर अस्पतालले आफ्नै फार्मेसी सुरु गरेपछि उपभोक्ताले सात गुणासम्म सस्तोमा औषधि पाउन थालेका छ..